Ikhasi eliyisiqalo - Kubike manje
Yeqa ekuhambeni kwemikhumbi
Sesha le website
Ukukuxhasa ekuvikeleni ukungathembeki nokuziphatha okungenasimilo emsebenzini
Ukuziphatha okungafanele kubiza izinkampani emhlabeni wonke izigidigidi zamaRandi unyaka ngamunye. Izinhlangano ezinesikhungo esizimele esisebenza ngezintambo zinciphisa ukulahleka kwenkohliso phakathi.
UKUSEKELWA ENDLINI IMFUNDO NOKUHLAZIYWA
BESPOKE & INKQUBO YOKUPHATHWA KWAMAKHAYA - ETHICSPRO®
AMAHORA AMA-24 NGOSUKU, IZINSUKU EZISIKHOMBISA IVIKI
I-Report It Now ™ ihlomisa ibhizinisi lakho ngamathuluzi wokuqhakambisa indawo yokusebenza engenakho ukungathembeki nokuziphatha kabi.
I-Report It Now ™ isebenza nawe nebhizinisi lakho ukudala isiko lokwethembeka nobuqotho emsebenzini. Ucwaningo lukhombisa ukuba nocingo oluzimele noluyimfihlo lokushaya impempe noma uhlelo olususelwa kuwebhu linciphisa ngempumelelo ubungozi ekuziphatheni okungalungile, njengokukhwabanisa noma ukuxhashazwa.
Sihlanganisa inombolo yethu yokubika kanye nemfundo, ukwesekwa, kanye nokuhlaziywa okuqhubekayo ukukusiza ukufezekisa isimo sokuziphatha kubasebenzi bakho, ngesikhathi esifanayo, sibakhuthaza ukuthi babike noma yikuphi ukungaziphathi ngendlela engaziwa, evikelekile futhi eyimfihlo.
Buka lethu Inqubomgomo yobumfihlo.
zokukhwabanisa emsebenzini zazikhona itholwe yithiphu
yemali engenayo ilinganiselwa ukuthi izolahleka ngenxa yokukhwabanisa unyaka nonyaka
maningi amathuba okuthi abasebenzi baqoqe amathiphu uma izinhlangano zisebenzisa ukuqeqeshwa kokuqwashisa ngokukhwabanisa
I-EthicsPro® - Iphephile, Ayaziwa, Kulula
Ingabe ibhizinisi lakho lisha kwa-EthicsPro®? Ngabe ufuna ukuthola eminye imininingwane?
Ukufinyelela ezincwadini zethu zemiyalo, sicela uchofoze ngezansi.
Finyelela imanyuwali ye-ethicspro®
Qaphela: Le mibhalo inokufinyelela okuvinjelwe. Uma ungaqiniseki ukuthi ngabe nguwe lo, unezinkinga zephasiwedi, noma ucabanga ukuthi udinga lawa madokhumenti, ngiyacela Xhumana nathi.
Inombolo yocingo yokubika ngokushaya imilomo ye-Report It Now inikeze abasebenzi bethu uhlelo oluphephile, oluzimele lapho bezobika khona ukungaziphathi kahle. Embonini lapho kungenzeka khona umsebenzi wokukhwabanisa, insizakalo yabo isisindisile izinkulungwane zamaRandi kule minyaka edlule.
- Indawo yokudlela yokudlela
Xhumana nathi ukuze uqalise
Singathanda ukusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo. Sishiyele umyalezo futhi sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu. Ngenye indlela, sicela usishayele ucingo usebenzisa le nombolo engezansi.
Ibike Manje ™ Ltd
I-PO Box 9038
Isikhungo Se-imeyili saseWaikato
Silapha ukukusiza. Yenza umbiko
I-Copyright © 2021 · Ngena ngemvume